Indlu ye-Eco "eNcinci".
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguJodi
Eyodwa, entsha kunye ne-eco-friendly "iKhaya eliNcinci" elakhiwe ngesitayile kunye nentuthuzelo engqondweni. Kuvotelwe iindawo ezilishumi eziphezulu ezizodwa zokuhlala e-Adirondacks yi-NYupstate. Le ndlu enamagumbi amabini ilungele iintsapho ezincinci kunye nezibini ngokufanayo. Ifumaneka kwimizuzu nje ngaphandle kweLali LP kunye ne-SL. Igqibelele nje! Ilungele zonke izinto ezimnandi. Singakwazi ukuhlalisa abantu abathathu. *Ukuzisa iqabane elinoboya? Nceda uqhagamshelane NGAPHAMBI kokubhukisha ukuze ubuze ngepolisi yethu.
Uyilo oluphefumlelweyo lwangoku, lwaseScandinavia "indlu encinci" ilinde wena kunye nokufika kwakho kwe-Adirondack!
Le ndawo iyasebenza, icocekile kwaye iqaqambile kodwa ayizukuba nkulu kakhulu ukuba ningababini nje! Isebenza ngeendlela ezininzi.
Ibekwe ngokufanelekileyo phakathi kweLake Placid (iikhilomitha ezi-5) kunye neChibi leSaranac (iikhilomitha ezi-4) kunye nokunyuka intaba, ukutyibiliza, ukutyibilika, ukutya kunye namathuba okuthenga.
Imigangatho ekhonkrithi efudunyezwa ngumgangatho oqaqambileyo, ifudumele kwaye ikhululekile ebusika, kwaye imigangatho yekhonkrithi iya kuyigcina ipholile ehlotyeni.
Zonke izinto eziluncedo ekhitshini ukupheka ukutya okunempilo kunye nesitya sokuhlamba izitya ukusicoca.
Ngaba ufuna ukuhlala ngaphandle kubusuku obufudumeleyo behlobo ngaphandle kweengcongconi? Indawo ekhuselweyo ngaphandle kwegumbi lokulala elikhulu ilungele ubusuku bokulala.
Kuthekani ngomlilo? Indawo yomlilo yenza urhatya olumnandi ukubalisa amabali emlilweni. Iinkuni ezininzi zokufumana malunga nepropati.
* Nceda uqaphele ukuba iilinen azibonelelwanga kodwa intlawulo eyongezelelweyo ye-30 $ kwigumbi lokulala, siya kubonelela ngeelinen. Oku kuya kubandakanya iiseti zamaphepha, iitawuli, iitawuli zesandla kunye namalaphu obuso. *
Igumbi lokulala 1: ibhedi enkulu
Igumbi lokulala 2: iibhedi ezi-3 zamawele
Iilinen zasekhitshini zibonelelwa njengebhafu, iingubo, imiqamelo kunye neduvet kwibhedi nganye.
Uzisa isilo-qabane sakho? Siyakwamkela izilwanyana ezincinci; okanye isilwanyana esi-1 esikhulu esiqeqeshwe ngokupheleleyo, esinezitofu zokugonya ezihlaziyiweyo kwaye siziphethe kakuhle. Nceda usazise NGAPHAMBI kokubhukisha. Iindwendwe zinoxanduva lwawo nawuphi na umonakalo owenziwe sisilwanyana.
4.94 out of 5 stars from 362 reviews
4.94 · Izimvo eziyi-362
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi362
Yeyiphi indawo entle onokuthi ube kuyo xa undwendwela ummandla we-High Peaks. Yindawo enemithi kodwa iNdlu encinci ikufuphi nelali yaseLake Placid (iikhilomitha ezi-5); kufuphi ne-Saranac Lake (iikhilomitha ezi-4); kufutshane nokunyuka intaba kunye nokuhamba ngesikhephe; kufutshane neWhiteface Mtn (iikhilomitha ezingama-25); kufutshane negrosari (Aldi, Hannaford, Price Chopper); igesi (iMaplefields (imayile eyi-1)); ukutya kunye nemisebenzi yangaphandle.
Umbuki zindwendwe ngu- Jodi
Asikho kwisiza, kodwa sihlala kwindawo; ukuba kuvela iingxaki sicela usazise njengoko singathanda ukujongana nazo ngokukhawuleza.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lake Placid